जब जिउँदो चितुवालाई मरेको सम्झेर उसैसँग सेल्फी लिन गए, हेर्नुस के भयो ? (भिडियो सहित) | kantipurplus.com
राजमार्गको छेउको नालीमा पल्टिएको चितुवालाई मरेको सम्झेर मोटरसाइकलमा आएका दुई युवकले त्यो चितुवासँग सेल्फी लिन खोजिरहेका थिए । यही क्रममा अचानक चितुवा उठेर दुईमध्ये एकलाई झम्टियो । चितुवाको पकडमा परेका ती युवक निकै मुस्किलले ज्यान बचाएर भागे । अर्का युवक भाग्ने क्रममा लडेर घाइते भएका छन् ।
त्यो चितुवा राजमार्गमा हिँडिरहेको कुनै गाडीको ठक्करले घाइते भएको थियो । भागेका युवकहरुले गाउँलेहरुलाई खबर गरेपछि एकैछिनमा भीड जम्मा भयो । गाउँलेहरुले वन विभागमा फोन गरेपछि वन विभागका कर्मचारी आएर चितुवलाई उद्धार गरे । भारतको राजस्थान उदयपुर जिल्लामा यो घटना भएको हो । जिल्ला वन अधिकृत ओपी शर्माका अनुसार चितुवालाई कुनै गाडीले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो । यसको पछाडीको हड्डी र खुट्टामा गहिरो चोट लागेको छ । चितुवालाई बायोलोजिकल पार्कमा राखेर उपचार भइरहेको छ । पूर्णरुपमा ठिक भएपछि उसलाई जंगलमा छाडिनेछ
ओली-देउवा भारतीय दुतावाश पुग्दा केहि नहुने ? हामि पुग्दा भारतवादी हुने ! सिमा मिचिएकै छैन : महतो
वाम गठबन्धनबाट प्रदेशमा मूख्यमन्त्री र सभामुखमा प्रतिष्पर्धा ! यस्तो छ सम्भावित सूची ..